DAAWO VIDEO: Shariif Xasan ”Qofna ma dhihi karo sida aan aniga rabay si aan aheyn dalka kama soconayo”! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO VIDEO: Shariif Xasan ”Qofna ma dhihi karo sida aan aniga rabay...
DAAWO VIDEO: Shariif Xasan ”Qofna ma dhihi karo sida aan aniga rabay si aan aheyn dalka kama soconayo”!
Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed, Shariif Xasan Sheekh Aadan oo maanta tagay Kismaayo
Kismaayo (Halqaran.com) – Madaxweynihii Hore ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ka mid ahaa mas’uuliyiin maanta gaaray magaaladda Kismaayo ayaa eedeen u jeediyay madaxda Dowladda Dhexe.
Shariif Xasan oo warbaahinta kula hadlay Magaaladda Kismaayo ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay Xayiraadda Dowladda Dhexe ay saartay Maamulka Jubbaland, kadib markii ay ku qanci waysay doorashadda Axmed Madoobe ku soo baxay.
Sidoo kale, Shariif Xasan ayaa sheegay reer Jubbaland ay mudan yihiin in lagu ammaano amniga iyo kala dambeynta ay la yimaadeen,balse waxa laga xumaado ay tahay in hawadii Soomaaliya hub loogu dhigo oo lagula dagaalamo xiligaan.
Madaxweynihii Hore ee koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan ayaa sheegay in qofna maanta uusan dhihi Karin “sida aan aniga rabay si aan aheyn laguma socon karo.
“Qofna maanta ma dhihi karo sida aan aniga rabay si aan aheyn laguma socon karo,Soomaaliya waxay isla ogolaatay ayaa lagu socon karaa, Dowladda Dhexe waa la aqoonsan yahay lama diidano,iyada in ay wax diido ma wanaagsana,ninkii reerka ugu weynaa in uu dagaalka bilaabo waa laga fiican yahay”, ayuu yiri Shariif Xasan.
Haddaba Hoose ka daawo Muuqaalka Shariif Xasan:
Madaxweynihii hore Koonfur Galbeed